Dalxiis warshad - Sinopulse tubbo Factory Co., Ltd.
Warshadda Sinopulse tubse waxay leedahay 15 sano soosaarista iyo dhoofinta khibrada tuubada Haydarooliga, tuubada warshadaha iyo rakibida, waxay dhaaftay shahaadada ISO 9 0 0 1 IYO MSHA. Brand Sinopulse waxaa laga iibiyaa dalal badan oo adduunka ah.
Aqoon isweydaarsiga oo dhan wuxuu ka kooban yahay in ka badan 20,000 oo mitir laba jibbaaran, waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsi caag ah, aqoon isweydaarsi jilicsan, aqoon isweydaarsi adag, aqoon isweydaarsi aan mandrill ahayn, dhismaha xafiiska.
Si loo ilaaliyo tayada xasiloon iyo waxtarka sare, waxaan diirada saareynaa qalabka, maareynta iyo nidaamka xakamaynta tayada, laga bilaabo alaabta ceyriinka ah, waxaa mara bakhaarada alaabooyinka dhamaaday, talaabo kasta waa la isla kormeerayaa.
Shaybaarka wax ceyriinku wuxuu tijaabiyaa xajmiga xaarka caaga, silig siligga siligga ah, xarkaha u dhexeeya caagga iyo silig birta ah, qalooca vulcanization caag ah.
Waxaa jira dhowr cutub aqoon isweydaarsi ah oo loogu adeegayo habab kala duwan oo khadka wax soo saarka ah. Kan ugu horreeya, xaashi caag ah oo isku dhafan oo leh caag LG iyo mashiinka wadajirka ah ee xawaaraha sare leh si loogu diyaariyo silig wadajir ah tuubada Haydarooliga.
Waxaan qaadanay mashiinno tidcan oo sii kordhaya si loo hubiyo in silig birta ah lagu xoojiyo xiriir la'aan. MAGAALADA MARAARKA EE GAARKA AH EE JARMALKA MAYERKA, MACALINKA ITALY VP, MAKIINADA SPIRAL EE XAWAARKA ayaa naga dhigeysa inaan ku guuleysano wax soo saar sare da'da da'da otomaatiga ah.
Mashiinka qabow ee quudinta qaboojiyaha wuxuu ka baxaa caag gudaha iyo dibedda ah, kaas oo si sax ah u xakamayn kara dhumucda tuubbada tubbada caagga ah; Dhanka kale, waxaan sameyn karnaa summad gaar ah oo lagu daabaco tuubada.
Soo saarida kadib, dhamaan tuubada waxaa lagu tijaabin doonaa hal dhibic shan jeer oo cadaadis shaqo ah.
Ka sokow, dufcad kasta waxaa lagu tijaabiyaa cadaadiska qarxa iyo baaritaanka dareenka. Kaliya alaabooyinka aqoonta u leh ayaa loo diri doonaa macaamilka.
Si diiran ayaa lagugu soo dhaweyn doonaa SINOPULSE